Intel Processors - keywords HERE
Home » computer » Intel Processors
Pentium4ကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ပီဖိုး ပီဖိုးဆိုပြီးတော့ အရမ်းရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ပီဖိုးကွန်ပျူတာဆိုတာ အတော်လေးကို ဒိတ်အောက်သွားပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ပီဖိုးနောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ Intel ရဲ့ CPU တွေအကြောင်းကို သေချာစွာသိတဲ့သူ အလွန်နည်းပါးလှပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ P4 နောက်ပိုင်းမှာ နည်းပညာပြောင်းလဲမှု အရမ်းမြန်ဆန်လွန်းခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ technology တွေ ပေါ်ထွန်းခဲ့တာရယ်ကြောင့်ပါ။
Intel Company က Pentium4နောက်ပိုင်း အစဉ်လိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ Processor တွေကတော့
1. Pentium D & Celeron D
2. Pentium (Dual Core) & Celeron (Dual Core)
3. Core2 Duo
4. Core2 Extreme
5. Core2 Quad
6. i7 တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် Pentium4ပြီးတော့ Pentium D ထုတ်တယ်။ Pentium D ပြီးတော့ Pentium ဆိုပြီး နောက်က ဘာမှမပါပဲ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု အဲဒီ Pentium ကို Dual Core လို့ပဲ လူသိများကြပါတယ်။
Pentium4ထိ 32bit ဖြစ်ပြီး Pentium D ကစပြီး 64bit တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ 32bit 64bit တွေဆိုတာက CPU ထဲမှာပါတဲ့ register တွေထဲမှာ သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ data ပမာဏကိုပြောတာပါ။
Dual Core ဆိုတာက CPU ထဲမှာ Core နှစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတာပါ။ သာမန် CPU တစ်လုံးမှာ Core တစ်ခုပဲ ပါပါတယ်။ Core ထဲမှာ ALU(Arithmetic Logic Unit), CU (Control Unit) နဲ့ Register ဆိုပြီး သုံးပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ Dual Core နည်းပညာဟာ သာမန် CPU နှစ်လုံးကို တစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင် ပေါင်းစည်းလိုက်တာနဲ့ တူပါတယ်။
Dual Core ပြီးတော့ သူတို့ထုတ်လိုက်တာက Core2 Duo ပါ။ Core2 Duo နဲ့ Dual Core လို့ လူတွေခေါ်ကြတဲ့ Pentium နဲ့ ဘာကွာသလဲဆိုတော့ Features အသစ်တွေ ပါတာ မပါတာပဲ ကွာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Core2 Duo က Dual Core ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့လည်း ယတိပြတ်ပြောလို့မရပြန်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် Intel Pentium E5300 နဲ့ Intel Core2Duo E4300 ကိုယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Pentium E5300 ကတောင်မှ Clock Speed ပိုများတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Dual Core (Pentium) နဲ့ Core2 Duo ကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ Process Number (Exxxx) တွေကိုပါ အတိအကျသိမှ နှိုင်းယှဉ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
Core2 Duo နဲ့ Core2 Extreme လည်း အလားတူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ Core2 Extreme ကို အတွေ့ရနည်းပါတယ်။
Core2 Duo နဲ့ Core2 Quad ရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ အရမ်းသိသာပါတယ်။ Core2 Quad က Core လေးခု ပါတယ်လေ။
i7 အကြောင်းကတော့ လေ့လာပြီးပါပြီ။ နောင်အလျဉ်းသင့်မှ ရေးသားဖော်ပြပါဦးမယ်။
စာဖတ်သူများ မှန်ကန်တဲ့ Processor များကို ရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေ။